ပြည်တွင်းသတင်း – Media Sharing
အသက်(၁၂)အရွယ် သမီးအရင်းကို နှာခေါင်းပိတ်မေ့ဆေးခက်ပြီး အကြိမ်ကြိမ်အဓမ္မကျင့်ခဲ့သူ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေ
အသက်(၁၂)အရွယ် သမီးအရင်းကို နှာခေါင်းပိတ်မေ့ဆေးခက်ပြီး အကြိမ်ကြိမ်အဓမ္မကျင့်ခဲ့သူ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေ ခွေးဇာတ်ခင်းပြီး ထွက်ပြေးတိန်းရှောင်နေတဲ့ သူယုတ်မာ မုဒိန်းကောင်ပါ …။ မြိတ်မြို့ ပါရမီ(၂)ရပ် မုဒိတာလမ်းတွင် အိမ်းငှားပြီး နေထိုင်နေတဲ့ ဇော်လင်း ဆိုသူသည် အသက်(၁၂)အရွက်ရှိ သူ၏ သ္မီးအရင်းကို နှာခေါင်းပိတ် မေ့ဆေးခက်ပြီး အကြိမ်ကြိမ် မုဒိန်းကျင့်ခဲ့သောကြောင့် အခု ကလေးမလေးခမျာ မြိတ်ဆေးရုံမှာ အတိဒုက္ခရောက်နေပါတယ်
ညည ငါးထောင်ပေးမယ်ဆိုပြီး ခြေတော်တင်ဖို့ ကြိုးစားကြသူတွေ ဝိုင်းနေတယ်ဆိုတဲ့….
ညည ငါးထောင်ပေးမယ်ဆိုပြီး ခြေတော်တင်ဖို့ ကြိုးစားကြသူတွေ ဝိုင်းနေတယ်ဆိုတဲ့…. ညည နှစ်ထောင်ပေးမယ် ငါးထောင်ပေးမယ်တဲ့ ကလေးအမေ ၁၈ နှစ်အရွယ်လေးခဗျာ မကူညီဘဲ ခြေတော်တင်ဖို့ ကြိုးစားကြသူတွေရဲ့ ဝန်းရံနေခြင်းကိုခံနေရရှာပါတယ် …။ ညည နှစ်ထောင် ငါးထောင် ကိုပဲထိုင်ယူနေရင်တောင် သူ့သမီးလေးနဲ့သူ အဆင်ပြေတဲ့ဘဝ ရနိုင်ကောင်းရဲ့ …။ သို့သော်လဲ ဇာမဏီငှက်တို့ရဲ့နှလုံးသားလိုမျိုး အသက်သေမှ အမြှီးကျွတ်ခံမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့
ခင်ပွန်းဖြစ်သူကြိုးဆွဲချသေဆုံးမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဇနီးဖြစ်သူမှ လူတွေထင်သလို မဟုတ်ကြောင်းပြော…
ခင်ပွန်းဖြစ်သူကြိုးဆွဲချသေဆုံးမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဇနီးဖြစ်သူမှ လူတွေထင်သလို မဟုတ်ကြောင်းပြော… ခင်ပွန်းဖြစ်သူကြိုးဆွဲချ သေဆုံးမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဇနီးဖြစ်သူမှ လူတွေထင်သလို မဟုတ်ကြောင်းပြော (ရုပ်သံ) (၈.၆.၂၀၂၀)ရက် ညနေ၅နာရီခန့်က ကိုလင်းထွန်းကျော်(ခ)ပေါက်ကြီး သည် အမြင့်(၁၀)ပေ ခန့်ရှိ နေအိမ်မီးဖိုခန်းအထပ်ခိုးမှ အရှည်(၄)ပေခန့်၊(၁)မတ်လုံးခန့်ရှိ အပြာရောင်ကြိုးနှင့် ကြိုးဆွဲချကာ (၅)လက်မခန့်အကွာ တွဲလောင်းအနေအထားဖြင့် သေဆုံးခဲ့ပါတယ် …။ ခင်ပွန်းဖြစ်သူလင်းထွန်းကျော်(ခ)ပေါက်ကြီးကြိုးဆွဲချ သေဆုံးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး
ခုလေးတင် Live လွှင့်ရင်း ကြိုးဆွဲချသေသွားတဲ့သူ သူ့အမျိုးသမီးက ဖောက်ပြန်လို့တဲ့…
ခုလေးတင် Live လွှင့်ရင်း ကြိုးဆွဲချသေသွားတဲ့သူ သူ့အမျိုးသမီးက ဖောက်ပြန်လို့တဲ့… ခုလေးတင်liveလွှင့်ရင်း ကြိုးဆွဲချသေသွားတဲ့သူ သူ့အမျိုးသမီးကဖောက်ပြန် လို့တဲ့ သူ့သမီးလေးတွေက ချောချောလေးတွေပါ။ ဘာကြောင့်များ ကလေးတွေရှေ့မှာ လုပ်ရက်လဲမသိပါဘူးဗျာ …။ သန်လျင်မှာနေတယ်လို့သိရကပါတယ် …။ Video ဖိုင် ရှိပေမယ့် Fb ကဖြုတ်ချလို့ တင်လို့မရ ဟု ဟန်ငြိမ်းဦးမှ ပြောသည် …။
မန္တလေးအောင်မြေသာစံမြို့နယ်မှာ အသက်(၂၅)နှစ်အရွယ် လူငယ်တစ်ဦးရုတ်တရက်လဲကျ သေဆုံးနေ…
မန္တလေးအောင်မြေသာစံမြို့နယ်မှာ အသက်(၂၅)နှစ်အရွယ် လူငယ်တစ်ဦးရုတ်တရက်လဲကျ သေဆုံးနေ… ၈-၆-၂၀၂၀ပြည့်နှစ် ၁၃း၃၀နာရီ အချိန်ခန့်တွင် မန္တလေး အောင်မြေသာစံမြို့နယ် မင်းတဲအီကင်းရပ်ကွက် ရတနာမဉ္ဇူဘုရားအနီးရှိ ဓမ္မာရုံရှေ့တွင် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ် အမှတ်အရ ရှမ်းပြည်နယ် မဘိမ်းမြို့နယ်ဘဟဲကျေးရွာဟု ပါရှိသူ အသက်၂၅နှစ်အရွယ်ဘ/ဦးကျော်တင့်ဦး၏ သားဖြစ်သူမောင်ချစ်လင်းနိုင်သည် မှောက်လျက်လဲကျ သေဆုံးနေ သူဘာ့‌ကြောင့် သေဆုံးလည်း ဆက်လက်စစ်ဆေးလျက်ရှိပါကြောင်း ကနဦးသိရှိရသူ မိဘဆွေမျိုးတွေ သိစေချင်လိုပါနော် …။
မှေးမှိန်သွားတဲ့ အိပ်မက်တွေ ရဲ့နောက်က YBS 40 ကြောင့် သေဆုံးသွားတဲ့ တက္ကစီသမားရဲ့ မိသားစုလေး…
မှေးမှိန်သွားတဲ့ အိပ်မက်တွေ ရဲ့နောက်က YBS 40 ကြောင့် သေဆုံးသွားတဲ့ တက္ကစီသမားရဲ့ မိသားစုလေး… သူက YBS 40 နဲ့တိုက်မိတဲ့ တက္ကစီယာဉ်မောင်းရဲ့အမျိုးသမီး။စကားကို ဖွဲ့နွဲ့လည်းမပြောဘူး။ ခံစားချက်ကိုလည်း ဖွင့်ဟမပြောတတ်ဘူး။သူ့ယောက်ျား ယာဉ်မတော်တဆဖြစ်ပြီးသေတာလည်း အခုချိန်ထိ လက်မခံနိုင်သေးဘူး။ကျမသူ့အိမ်ရောက်သွားတော့ သားငယ်လေးကို နို့တိုက်နေတယ်။ သားအကြီးက တခြားအိမ်မှာသွားကစားနေတယ်တဲ့။သူ့ကို စိတ်ပြေလက်ပျောက် လွှတ်ပေးထားတယ်တဲ့ …။ ၆
ဘဝဆက်တိုင်းဆက်တိုင်းမှာညီမလေးလိုချင်နေတဲ့ သာယာတဲ့မိသားစုကိုပိုင်ဆိုင်ရပါစေလို့ May.30.2020စနေနေ့ ညနေပိုင်း5နာရီလောက် ကားတိုက်လို့ဆုံးသွားတာပါ) 19.10.2018သောကြာနေ့မှာ ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ချစ်သူဖြစ်ခဲ့ကြတယ် ရန်ဖြစ်လိုက်ပြန်ချစ်လိုက်နဲ့ ချစ်သူသက်တမ်း1နှစ်8လပြည့်လာခဲ့တယ်….သူကတော့မျှော်လင့်ချက်ကြီတဲ့မိန်းခလေးတစ်ယောက်ပါ” နောက်၃နှစ်လောက်ဆို တို့နှစ်ယောက်မင်္ဂလာဆောင်ပီး ပိုက်ဆံစုကြမယ်…. အိမ်လေးလှလှဆောက်ပီးသာယာတဲ့မိသားစုကိုပိုင်ဆိုင်ချင်တယ်”သူကကျွန်တော်ထက်13ရက်ကြီးပေမဲ့ သူ့ကို”အမ”လို့ခေါ်တာမကြိုက်ဘူး ”ညီမလေး”ပဲခေါ်ခိုင်းတယ်…2020 (2)လပိုင်းမှာကျွန်တော်ဦးဇင်းဝတ်ဖို့ မြန်မာပြည်ကို ပြန်လာခဲ့တယ် သူကပြန်ချင်ပေမဲ့ အိမ်မပိုင်တဲ့သူတစ်ယောက်မို့ ပြန်ခွင့်မရှိခဲ့ဘူး … သူကတော့ချက်ပြုတ်တဲ့အပိုင်းမှာ တကယ်တော်ပါတယ် ဖုန်းပြောတဲ့အချိန်တိုင်း”အကိုဒီနေ့ညီမစားစရာတွေလုပ်ထားတယ် အရမ်းစားလို့ကောင်းတယ် ထိုင်းကိုပြန်တက်လာပါတော့ အကို့ကိုချက်ကျွေးချင်တယ်”လို့ခေါ်တယ်
တစ်နိုင်ငံလုံးက ကျောင်းသား/သူတွေအတွက် အထူးသတင်းကောင်းပါ….
တစ်နိုင်ငံလုံးက ကျောင်းသား/သူတွေအတွက် အထူးသတင်းကောင်းပါ…. တနိုင်ငံလုံး က ကျောင်းသားတွေ ကို နှာခေါင်းစ ည်း (၂) ခု အခမဲ့ ပေးမည် မြန်မာ တစ်နိုင်ငံလုံးက ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကို မျက်နှာကာ၊ နှာခေါင်းစည်း နဲ့ ကျောင်းသုံးပစ္စည်းတွေကို ပညာရေး ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ နိုင်ငံတော်ဘက်ဂျက်ကနေ ပေးဝေသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနက သိရပါတယ် …။ “ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကျောင်းအပ်လက်ခံတဲ့အချိန်မှာ